Nhasi uno mucherechedzo wechigumi nemakumi masere ekuberekwa kwaGustavo Adolfo Bécquer | Zvazvino Zvinyorwa
Iwo pamazuva senge nhasi apo ini ndiri kunyanya kufara kugona kunyora nezve zvinyorwa. Chikonzero, apa: Nhasi uno mucherechedzo wegumi nemakumi masere ekuberekwa kwaGustavo Adolfo Bécquer, mumwe wevanyori vaviri vane rudo "vakamutsa" kudanana muSpain. Mumwe munyori, sei kusamutumidza zita: Rosalía de Castro. Pamwe chete ivo vakamutsiridza Romanticism, iyo yakanga yatanga kudzikira kwakatenderedza 1850. Nechikonzero ichi, vanyori vaviri ava vanoiswa sevashure-veRudo.
Asi chengetedza Bécquer, isu tichapfupisa muchidimbu zvairehwa iye nebasa rake pamabhuku:
Akanyora mabasa mazhinji, asi pamusoro pezvose anozivikanwa nekuda kwake "Rhymes" y "Ngano", yekupedzisira yakanyorwa muchirevo.
Kunge kudanana kwakanaka akada vakadzi vakati wandei: Julia Espín, Elisa Guillén naCasta Navarro. Neyekupedzisira akaroora muna 1861 uye akarambana makore akazotevera.
Akafa aine makore anodarika makumi matatu nemana, Nhamo. Hatina kukwanisa kunakidzwa nemabhuku ake kwenguva yakareba asi kunyangwe izvi akazove munyori anozivikanwa pakati pevamwe vanyori.
Kunyange zvakadaro, nhetembo yake yakaburitswa mushure mekufa, kunyanya muna 1871, sezvo nhetembo dzake dzekutanga dzakarasika mumoto, izvo Bécquer yaifanira kuzvinyorazve, zvakare kugadzira zvimwe zvitsva, zvaakadaidza "Bhuku reShiri". Mushure mekufa kwemunyori, shamwari dzake nevamwe vake vakagadzirisa zvinyorwa izvi uye vakazviburitsa pasi pezita iro rinozivikanwa nhasi: "Rhymes".
Nhetembo dzake nhetembo pfupi, dzakakurumbira mutoni uye nenziyo zhinji mumavhesi avo. Mavari, matombo mana akapatsanurika anogona kunyatso kucherechedzwa:
Rhymes I kusvika VIII: Ivo vanotaura nezve nhetembo pachayo, yezve nyanduri chiito chekunyora. Mavari kuoma kwekuti nyanduri ave nekuwana mazwi akakodzera anoburitsa chaizvo zvaanoda kutaura kunoonekwa pazviitiko zvakawanda.
Rhymes IX kusvika XXIX: Ivo vanotaura nezve tariro uye inofadza rudo, rudo runonzwika kwekutanga uye runonakidza.
Rhymes XXX kusvika LI: Izvi, zvinopesana, zvinotaura nezve rudo kusuwa, uye zvese izvi zvinosanganisira.
Rhymes LII kusvika LXXVI: Misoro yake yakajairika kusurukirwa, kurwadziwa, kusuwa uye kusava netariro.
Mune idzi nhetembo, Bécquer inotaura nemukadzi mutete, ane maziso ebhuruu («Mudzidzi wako webhuruu ...»), nevhudzi bvudzi uye kujeka. Anoti irwo rwakavhiringika uye harugoneke rudo, asi dzimwe nguva mukadzi anoita kunge nhetembo pachayo, iyo isingasviki, idzo nhetembo dzakakwana dzinoshora munyori ...
Nhetembo yaBeccer's inosiyana zvakanyanya kubva kunhetembo dzerudo dzakambonyorwa. Bécquer, pasi pe yepedyo uye isinganzwisisike halo, anotiza kubva mungano yemakonzonendi emavhesi erudo, uye anogadzira ake nziyo: mapfupi uye mapfupi, akananga, akasununguka, haana kumanikidzwa kana kushongedzwa, ...
Iye pachake akataura izvi nhetembo yake:
«Natural, pfupi, yakaoma, inotubuka kubva mumweya kunge yemagetsi inotsvaira, iyo inorwadza kunzwa neshoko uye kutiza; uye isina kupfeka yehunyanzvi,… inomutsa iwo chiuru mazano anorara mugungwa risina chigadziko rwekufungidzira ».
Iyo yekufananidzira yenhetembo yake uye kukosha kwayo yakaratidza yakasimba pesvedzero pane vanyori Chemhondoro Juan Ramón Jiménez kana avo veChizvarwa che27. Naizvozvo, zvinogona kunzi Bécquer aive mudetembi pamberi penguva yake, mutungamiriri wekufamba kwekupedzisira, pamwe nekunonoka kudanana.
Heino zvinyorwa pamusoro pehupenyu nebasa reGA Bécquer. Ingori maminetsi gumi nemashanu, zvakakodzera kuona:
Dzimwe dzedzimbo dzake (XXX, LIII,
Musodzi wakaonekwa mumaziso ake
uye kumuromo wangu chirevo chekuregerera;
Kuzvikudza kwakataura ndokupukuta misodzi yake,
uye chirevo pamiromo yangu chakapera.
Ndiri kufamba nenzira; iye, kune imwe;
asi, tichifunga kudanana kwedu,
Ndichiri kuti: "Sei ndakanyarara musi uyu?"
Uye iye achati: "Sei ndisina kuchema?"
Kugomera mweya uye kuenda kumhepo.
Misodzi imvura uye inoenda kugungwa.
Ndiudze, mukadzi, kana rudo rukanganikwa
Unoziva here kwainoenda?
Idzo nyengura dzinodzoka
pavheranda rako matendere avo kuti urembedze,
uye zvakare nebapiro kune ayo makristaro
Asi idzo dzakabatwa nendege
runako rwako uye mufaro wangu kufungisisa,
avo vakadzidza mazita edu ...
Avo ... havazodzoka!.
Iyo bushy honeysuckle inodzoka
kubva mubindu rako masvingo ekukwira,
uye zvakare manheru zvakatonyanya kunaka
maruva ayo achazaruka.
Asi avo, vakakomberedzwa nedova
ane madonhwe atakatarisa achidedera
uye kudonha semisodzi yezuva ...
Avo ... havazodzoka!
Ivo vachadzoka kubva murudo munzeve dzako
mazwi anopisa ekurira;
moyo wako kubva pahope huru
Asi mbeveve uye kunyura uye pamabvi angu
Mwari paanonamatwa pamberi pearitari yake,
sekuda kwandakakuitai ...; ibva pachiredzo,
Zvakanaka ... havazokuda iwe!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Nhasi uno mucherechedzo wechigumi nemakumi masere ekuberekwa kwaGustavo Adolfo Bécquer
Teodora Leon Salmon naAmiot akadaro
Zvakanaka, ini ndaifarira chaizvo kuteerera odhiyo nezve hupenyu hwaBecquer uye kuverenga yake mutinhimira. Uye semunhu anoda tsamba, ndinoda kugamuchira nhau dzekunyora.
Ini ndinonyorawo nekutsikisa.
Pindura Teodora Leon Salmon kubva kuAmiot
11 JKRowling zvirevo pamusoro paHarry Potter